UKUHLALWA KWEZOMTHETHO NGOKUTHENGA KWI-Ukraine | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | Visa GOLDEN for Ukraine, Immigration kwezoqoqosho utyalo Ukraine yokuhlala ngu-mali Ukraine, yokuhlala ngu-mali Ukraine, yokuhlala ngeenkqubo zotyalomali Uk
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo mali lweUkraine kunye neVisa yeGolide
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eUkraine ngoku:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eUkraine
● Ubummi ngotyalomali oluvela eUkraine
● IVisa yegolide eUkraine
● Ipasipoti yesibini evela eUkraine
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eUkraine ngokutyala izindlu nomhlaba
Best Abameli bokuhlala ngoTyalo mali eUkraine Kunye namagqwetha ee Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eUkraine kunye nabarhwebi beepropathi zokuhlala kwiUkraine basebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo-mali eUkraine zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eUkraine, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eUkraine, Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eUkraine, Ukuhlala kwakhona okwesibini ngotyalo-mali eUkraine, Ubumi kwakhona ngobutyalo-mali eUkraine, ubumi kunye nokuhlala ngokutyala imali eUkraine. , Indawo yokuhlala isigxina ngotyalo-mali eUkraine, Ukuhlala okwethutyana ngotyalo-mali eUkraine, Ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo-mali eUkraine, Ukuba ngumhlali ngezikim zotyalo-mali eUkraine, Ubummi ngotyalo-mali eUkraine, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eUkraine, Ubumi ngenkqubo yotyalo-mali eUkraine, okwesibini Ubummi ngotyalo-mali eUkraine, ubumi bobabini ngotyalo-mali eUkraine, indawo yokuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali eUkraine, ukuhlala kunye nokuba ngummi ngokutyala imali eUkraine, iinkqubo zoBumi kwezoqoqosho eUkraine, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eUkraine, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eUkraine, okwesibini ipaspoti eUkraine, ipasipoti yesibini Iinkqubo ze-ort eUkraine, inkqubo yesibini yokundwendwela eUkraine, ipasipoti yesibini yesibini eUkraine, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eUkraine, ipaspoti yesibini yozakuzo eUkraine, ipasipoti yesibini ngokutyala imali eUkraine, ipaspoti yesibini yokuba ngummi eUkraine, inkqubo yesibini yokundwendwela eUkraine, yesibini Izikimu zokundwendwela eUkraine, igosa lokundwendwela eUkraine, iiVisa zegolide egolide eUkraine, iinkqubo zeVisa egolide eUkraine, inkqubo yegosa yegolide eUkraine, eyesibini visa yegolide eUkraine, inkqubo yesibini yegosa yegolide yaseUkraine, I visa yegolide eUkraine, ubumi kunye negosa legolide eUkraine, ukuhlala kunye nevisa yegolide eUkraine, ubummi begolide be visa eUkraine, inkqubo yevisa yegolide eUkraine, izikimu zevisa zegolide eUkraine.
"1 izisombululo zokumisa" kuko konke ukuhlala kwakho ngokutyala imali eUkraine ngenkxaso eyongezelelweyo.
Ubuncinci botyalomali eUkraine kubuhlali ngokutyala: EUR 100,000
Intshayelelo Ukraine kunye yokuhlala ngu Investment
Funda ngakumbi malunga Ukraine
I-Ukraine yeyaseMpuma Yurophu. Uqoqosho olunqamlezayo lwase-Ukraine lwenziwa njengeqhekeza elibalulekileyo kuqoqosho olukhulu lweSoviet Union. Ngelixa besamkela isibonelelo esithobekileyo soovimba beSoviet Union kunye nokwenza imveliso ebonakalayo enexabiso elisezantsi, iUkraine yayinokukhetha ukuhambisa isahlulo esikhulu sesivuno esipheleleyo kule mihla kwaye ngakumbi kwimimandla yokufama yezoqoqosho lwaseSoviet. . Ngokwenyani, ubumbano olulungelelanisiweyo lotshintshiselwano lobuninzi oluvela eUkraine, longeza kwisinye kwisihlanu somvuzo walo woluntu, lincediswa ngezimali zokuqhubela phambili kwezemali kwiindawo ezahlukeneyo zeSoviet Union, eRashiya naseKazakhstan.
Ukutya kuninzi kwaye kudla ngokuthozama! Nangona kunjalo umntu akanakulindela ukufakwa kwezondlo ezifumaneka e-US okanye kumazwe aseNtshona yeYurophu, kuyanelisa phantse sisikhokelo somntu.
Ubumelwane bezothutho zinoqoqosho kakhulu! Umntu unokuhamba naphina phakathi kwedolophu nge-1 Grevnah! Khumbula i-Grevnah ijikeleze i-1 / yesihlanu yedola yase-US okanye malunga neepeni ezingama-20. Kwimeko apho umntu ethatha enye yeemethane ezilawulwa ngakumbi ukuhanjiswa okunamaxesha, sisiqingatha esikhulu seGrevnah okanye iipeni ezili-10!
I-Ukraine ngokungathandabuzekiyo ininzi kakhulu yamanenekazi amnandi! Kwimeko apho unethamsanqa ngokwaneleyo lokutshata nomntu onobuntu obuthandekayo kwaye hayi owemba igolide, kuyakwenza ukuba uphile eUkraine ngokulula kakhulu, nangona kunjalo, ayibalulekanga kwaphela. Kwimeko apho wonwabile ukuthenga indlu apha, iya kuba yinto elula ukuhlala apha ngaphandle kwemiceli mngeni.
Akukho nto kunzima ukulandela amabala apho umntu anokutshintsha khona iifom zezemali kubandakanya iidola zaseMelika, iiponti zaseBritane, iRubles zaseRussia, kwaye, ngokucacileyo, ziiYuro. Imigangatho eyahlukeneyo yemali inokuthi ithengiswe apha nangona kunjalo ukujolisa kurhwebo kuzo ayizizo zonke ezivulekileyo ngokukhawuleza. Oku kubandakanya iidola zaseOstreliya kunye neeFranc zaseSwitzerland.
Ingeniso yeebhanki yotyalo-mali iphezulu kakhulu apha! Kulula kakhulu ukufumana isandi kunye nokuzinza kweebhanki, ezihlawula i-premium ye-12.5% ​​kwimali yobumelwane. Isindululo esithile esiphakamileyo njenge-17% nangona kunjalo asixhomekeki ngokubanzi. Zombini iRaiffeisen (iBhanki yaseAustria esebenza kunye apha) kunye ne-OTP (Ibhanki yaseHungary) inokuthenjwa kwaye ifumaneka ngokufanelekileyo eUkraine.
IiATM ziyafikeleleka kwiindawo ezininzi naphina kwiindawo zasezidolophini. (Nangona kunjalo, ngekhe ufumane enye enolwimi lwesiNgesi).
Zimbalwa iiMarket eziSasazekileyo ezisasazeke kuyo yonke indawo kwiindawo ezisezidolophini njengoko zingenakulinganiswa ngakumbi iimarike zentengiso ezivulekileyo kwaye zime kufutshane nendawo nganye. Ngaphandle kwento yokuba i-assortment inokuvalelwa, iivenkile ngokubanzi zihlala ziindawo ezingcono zokuthenga izinto ezinkulu ezinokuthenjwa.
Ukuqwalaselwa ngokwezonyango eUkraine (kubahlali) simahla! Imfuno enye ukuhlawulela imigqaliselo kunye nezinto ezinxulumene noko kulindeleke ukuba zibongamele. Uqwalaselo lwaluchanekile kwaye lusebenza nokuba ngaba alusebenzisi olona lwakhiwo lutsha lufikeleleke kwenye indawo!
Umhlaba ungathengwa apha (iDachias) ngexabiso eliphantsi njenge- $ 4000.00 ukuya kwi- $ 5000.00 USD! I-Dachia ihlala ichola isiqwenga esixekweni kwindawo yesizwe engalindelwanga ukuba ihlala ihlala ihleli. I-Dachia ngesiqhelo inamanzi abalekayo (aqhelekileyo abekwe ngaphandle kubume) kunye namandla. Ngokwesiqhelo inendlu yangaphandle yeofisi zangasese. Ngayiphi na imeko, zinokuyilwa ngokutsha ngokufanelekileyo ngexabiso eliphantsi. Uninzi lusondele ngokwenene kwizithuthi zokumisa.
Ngokuqhelekileyo kulula ukufumanisa abantu bendawo abanokukhetha ukuphucula amandla abo esiNgesi. Kolu luhlu, akukho nzima ukulandela phantsi ukuhlawula abafundi kwizifundo zesiNgesi.
Ukuziqhelanisa nenye okanye enye iRashiya okanye iUkraine akubalulekanga ekujongeni izinto eziqhelekileyo ezinje ngokuthenga kunye ne-entomb okanye ukuhamba ngaphakathi.
Iinkcukacha ezisisiseko zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali lwaseUkraine
Ubuncinci botyalomali Indawo yokuhlala ngokutyala imali eUkraine
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eUkraine
I-visa yokuhlala isigxina kubatyali mali
Iqhubekekisa ixesha lokuhlala ngotyalo-mali lwaseUkraine
Emva kweminyaka emi-5 ngokuhlala ngokusemthethweni e-Ukraine
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseUkraine
Iinketho zotyalo mali ze Indawo yokuhlala ngotyalomali lweUkraine
> Ulwandle kunye nokwakha iinqanawa
> Indawo yasemoyeni
> Iinkonzo ze-IT
> Imigodi kunye neZinyithi
> Ukuthengiswa kwezindlu kunye nokwakhiwa
> Iinkonzo zebhanki nezezezimali
Kutheni ukuya kubuhlali ngokutyala eUkraine
I-Ukraine lilizwe elidibanisa iYurophu ne-Russian Federation. Ilizwe lineefama ezityebe kakhulu, ezenza ukuba kuthunyelwe kumazwe angaphandle okuziinkozo ngobukhulu emhlabeni wonke. Ilizwe linezixhobo ezininzi zendalo ezifana ne-iron, amandla, imichiza njalo njalo. Ilizwe linenkqubo enkulu yerhafu. I-Ukraine yindawo yamashishini amatsha. Ikomkhulu lelizwe yiKiev. Ukuhlala kweUkraine ngotyalomali kunokufunyanwa kwinyanga e-1.
Ukufudukela kosapho eUkraine
Inyathelo lokuqala lokufumana imvume yokuhlala okwethutyana njengelungu losapho lomntu wasemzini ohlala eUkraine kukufumana i-D-Class visa evela kwelinye loonozakuzaku baseUkraine abakwamanye amazwe. Le visa isetyenziselwa ukugunyazisa ukufika kwamalungu osapho eUkraine ukuze kungeniswe isicelo sokuhlala.
Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eUkraine
Ukufumana imvume yokuhlala eUkraine kunzima kakhulu kuba ekuphela kwendlela yokuyifumana isekwe kwimvume yokufudukela kwelinye ilizwe. Ngokunjalo imvume yokungena ikhutshwa ngezizathu ezinje ngomtshato kummi waseUkraine. Ke ukuyifumana ngotyalo-mali lolona khetho lufanelekileyo. Utyalomali lwe-100,000 USD lunokwenziwa ngokuthenga ipropathi kwinkampani. Umntu unokutyala imali kumacandelo ezoqoqosho asakhulayo. Kananjalo umntu unokuthenga iimveliso eUkraine azithengise phesheya.
Imfuneko yemali ye-Ukraine
Utyalomali kufuneka lube ubuncinci kwi-100,000 USD. Kuya kuba lukhetho olunobulumko ukwenza utyalomali lwangaphandle ngokudala inkampani okanye ube yinxalenye yegunya eligunyazisiweyo kwinkampani yaseUkraine. Utyalomali kufuneka lube kwimali eguqulwayo kwaye ilingane ne-100,000 yeedola. Isixa kufuneka sibhaliswe ngokomthetho. Iimali ezityaliweyo kufuneka zivela kwimithombo esemthethweni. Utyalomali kufuneka lube negalelo kuqoqosho lwaseUkraine. Ukuthenga ipropathi ngeenjongo zokuphila akufakwanga njengenxalenye yotyalo-mali.
Inkxaso yabathengi kubuhlali ngokutyala imali eUkraine
Iqela lethu Kuhlala Ngabameli botyalo mali baseUkraine kwaye Kuhlala ngoTyalo-mali Amagqwetha eUkraine inika abathengi kunye neentsapho zabo eUkraine ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eUkraine, ukuhlala ngokutyala imali evela eUkraine kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali evela eUkraine okanye iVisa yeGolide evela eUkraine okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eUkraine okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eUkraine, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani I-Ukraine okanye i-offshore, izibonelelo zabantu e-Ukraine kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eUkraine nakwindawo yesibini yokuhlala.
Inkxaso ekhethekileyo yabemi baseUkraine:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali yeUkraine, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena eUkraine, abatyali-mali abafikelelekayo abafudukela eUkraine, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngabacebisi botyalo-mali baseUkraine, Indawo yokuhlala efikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali eUkraine kunye nefemi yokubonelela ngokufudukela eUkraine
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukusuka eUkraine ukuya kumazwe angama-37.
Visa yegolide eUkraine ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eUkraine ukuya kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eUkraine ukuya kumazwe angama-37.
Ukufudukela kwamashishini okusuka eUkraine ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eUkraine.
Iinkqubo zeVisa zegolide eUkraine ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ezisuka eUkraine ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eUkraine ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eUkraine ukuya kumazwe angama-106.
Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali lwaseUkraine kwiiNdawo zokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo mali lwearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba eUkraine ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali lwaseUkraine, nanini na, xa efuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo lokuba ngabahlali ngokutyala imali eUkraine. Sidibene nabaphuhlisi bezindlu ezimbalwa eUkraine abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eUkraine, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala kwabemi baseUkraine ngokutyala izindlu nomhlaba eUkraine.
Kufuneka uyazi -Ukuhlala kwakhona kweUkraine ngoTyalo mali
Ukuhlala kwakhona ngugqwetha lotyalo mali eUkraine kuya kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu acacisiweyo ukuze ube yimpumelelo yokuhlala kwakho ngokutyala imali eUkraine. Iinkonzo zethu ezisemgangathweni zokuHlala kwakhona ngoTyalo mali eUkraine zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka e-Ukraine okanye e-Ukraine, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqhuba inkuthalo yokuqala ngenxa yoku, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokucebisa ukuba ngumhlali ngokutyala imali eUkraine kubaxhasi ukuze bafumane imvume yokuhlala eUkraine kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo ngenxa yeUkraine, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubele phambili kunye nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eUkraine siya kufuna iikopi ezivavanyiweyo zepasipoti yomthengi kunye namalungu osapho.
Inguqulelo kunye ne-apostille yamaxwebhu Ukuhlala kwakhona ngesicelo sotyalo mali seUkraine Amagqwetha ethu akhethekileyo okuhlala ngokutyala imali eUkraine kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu akho okuhlala kunye nosapho lwakho abe sisicelo sokutyala imali eUkraine sele silungile, siza kuyizalisa ngabasemagunyeni baseUkraine
Nje ukuba isicelo sakho sokuhlala ngokutyala eUkraine samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye izixhasi.
Asikuxhasi okanye ukubonelela ngokuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eUkraine kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini eUkraine:
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali Ukraine azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezivela okanye eUkraine.
Kuhlala ngeenkqubo zotyalo-mali for Ukraine azinikezelwanga ukuba zibekwe esweni ubuGcisa eUkraine okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye zisuka okanye ziye eUkraine.
Kuhlala ngokubonisana notyalo mali Ukraine awanikelwanga kuyo nayiphi na imisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eUkraine.
Kuhlala ngenkxaso yotyalo mali eUkraine ayenzelwa abantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eUkraine.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali Ukraine ayisiyo yamashishini ajongene nezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eUkraine.
Kuhlala ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeUkraine ayifumaneki kubantu baseUkraine abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eUkraine, okanye ukuthuthwa kwamalungu oLuntu.
Kuhlala ngotyalo-mali eUkraine ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Kuhlala iinkonzo zenkqubo eUkraine ayizizo ezenkolo kunye noncedo lwabo eUkraine.
Kuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Yukreyini ayibonelelwa ngabantu abajongana neZografi eUkraine.
Indawo yethu yokuhlala amagqwetha eUkraine abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eUkraine.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubaxhasi eUkraine nakwi-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva malunga nokwaliwa kwabasemagunyeni eUkraine ukuvunywa kwesicelo Kuhlala ngotyalo-mali eUkraine.
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eUkraine nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngoBumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo mali eUkraine kutyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu e-Ukraine.
Ixhaswe kukuhlala kwamazwe ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho zaseUkraine, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Indawo yethu yokuhlala ngeenkonzo zotyalo-mali zaseUkraine zibonelela ngexabiso eliphantsi, ngezinga lempumelelo laseUkraine.
Sithathe iminyaka yamava okuhlala kwakhona kwiUkraine ukuxhasa abathengi kunye neentsapho zabo eUkraine.
Amava okuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo-mali eUkraine kunye neearhente zomthetho zaseUkraine ezibonelela ngenkxaso kubathengi.
Sinezona solicitors zintle kunye neearhente zenkqubo yokuphatha iUkraine kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eUkraine nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu yeUkraine
Sinamava aphesheya kubuhlali ngokutyala kubandakanya iUkraine, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko, ukuhlala kwakho ngokutyala imali eUkraine kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zokuhlala ngokuTyala imali ukuya eUkraine
Ukubala iindleko zokuhlala ngokutyala i-Ukraine nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi beUkraine, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zokuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali yaseUkraine kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa eUkraine
Inkqubo yemvume yokusebenza eUkraine
Ukuhlala okwethutyana eUkraine
Indawo yokuhlala isigxina eUkraine
Oonozakuzaku kunye nabameli baseUkraine
Indawo yokuhlala ngoTyalo mali eUkraine nakwezinye iiNkonzo
Sibonise ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eUkraine kwiimfuno zangoko okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukufuduka nosapho lwakho ukuya eUkraine ngokutyala imali, thina njengeqabane lakho eUkraine, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eUkraine ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kokuhlala ngokubonisana notyalo-mali eUkraine, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiUkraine, ongenakufumana phantsi kwesinye isambrela esinikezwe ngabaphi na abanye abacebisi baseUkraine esenza ivenkile yokumisa enye yeUkraine kunye namazwe angama-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini eUkraine ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kokuhlala ngokutyala imali eUkraine ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokuzimanya eUkraine nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eUkraine okanye Offshore kunye namazwe ayi-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eUkraine zitshiphu kuthi.)
Iakhawunti yeBhanki eUkraine
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eUkraine uya kuyidinga i-akhawunti yebhanki yobuqu eUkraine kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eUkraine, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Inase ufuna ukubonisana eUkraine, kuba izisombululo zentlawulo yedijithali eUkraine Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye fintech eUkraine okanye izisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuhlala kwakhona ngokutyala imali Ukraine ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eUkraine ukuqala kwangoko eUkraine.
Iinkonzo zabasebenzi eUkraine
yethu inkampani yezabasebenzi eUkraine inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba zengqesho eUkraine free.
Iifowuni ezinyanisekileyo zeUkraine
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zaseUkraine kunye amanani abonakalayo eUkraine Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eUkraine
Accounting, ngenxa yenkuthalo eUkraine kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eUkraine
Cwangcisa ishishini eUkraine
Emva kokuhlala ngokutyala imali eUkraine, ukuseta ishishini kwi Yukreyini.
Sinikezela ngezisombululo ze-IT ezichazwe apha eUkraine
Uphuhliso lwezorhwebo eUkraine
Uphuhliso lwewebhu eUkraine
Uphuhliso losetyenziso eUkraine
Uphuhliso lweSoftware eUkraine
Amagqwetha okuhlala kwakhona ngoTyalo mali eUkraine
Sibonelela ngokuhlala ngokusemthethweni ngezisombululo zotyalo mali eUkraine kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, eUkraine, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho yaseUkraine ineearhente zokufudukela eUkraine, sinedumela lokuhambisa awona mava asemagqabini okulungiselela abathengi eUkraine kunye Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseUkraine kunye neentsapho zabo. Ukuhlala kwethu liqela lotyalo-mali eUkraine kubonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eUkraine, kwimvume yakho yokuhlala eUkraine ivunyiwe.
Amandla egqwetha laseUkraine liyafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoKuhlala kwakhona ngabaceli botyalo mali eUkraine. Ukuba useUkraine okanye uceba ukutyelela iUkraine, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eUkraine ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kumhlaba waseUkraine. Kuxhomekeka kwilizwe lokuhlala kwakho, kufanele ukuba kukhutshwe umthetho okanye kumiswe ngokusemthethweni ngummeli waseUkraine.
Imibuzo ebuzwa qho- Ukuhlala kwakhona ngoTyalo-mali eUkraine
Ithini inkcazo yokuhlala ngokutyala imali eUkraine?
Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eUkraine, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala eUkraine ngokutyala imali kuqoqosho lwaseUkraine ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, ukuthengisa izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njlnjl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eUkraine, ukuhlala kwenkqubo yotyalo mali yeUkraine ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo-mali eUkraine, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eUkraine, eyona ndawo yokuhlala iphambili ngamagqwetha otyalo-mali eUkraine kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo-mali eUkraine, abasebenza eyona ndawo ingcono yokuhlala ngabameli botyalo-mali eUkraine, kunye neefem eUkraine.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eUkraine | Ukuhlala kwakhona ziiarhente zotyalo-mali eUkraine | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eUkraine | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eUkraine | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eUkraine
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngokutyala imali eUkraine?
Ubummi ngotyalomali eUkraine, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseUkraine ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseUkraine ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalomali eUkraine, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseUkraine exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eUkraine, ngobumi bethu obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eUkraine, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eUkraine kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali baseUkraine, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo-mali eUkraine, kunye neefemu zokubonisana nabantu abavela kwamanye amazwe eUkraine.
Iinkonzo zongenelelo lwabatyali mali ezifikelelekayo eUkraine | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eUkraine | Utyalomali olufikelelekayo lwamagqwetha e-Ukraine | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha e-Ukraine | Abatyali mali abangenakufikeleleka eUkraine | Iifemu zomthetho wofuduko ezifikelelekayo zeUkraine
Ithini inkcazo yepaspoti yesibini eUkraine?
Ipasipoti yesibini eUkraine, inokuchazwa njengokufumana ubumi obusemthethweni baseUkraine ngokutyala imali kuqoqosho lwaseUkraine ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eya eUkraine, inkqubo yesibini yokundwendwela yeUkraine exhaswa Iinkonzo zokundwendwela zesibini eUkraine, ngamagqwetha esibini eepasipoti eUkraine, awona magqwetha epasipoti aphezulu eUkraine kunye nabacebisi bepasipoti abaphambili eUkraine, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eUkraine, kunye neefem zokubonisana zokufudukela eUkraine.
Iinkonzo zokundwendwela zesibini eUkraine | Iiarhente zokundwendwela zesibini eUkraine | Amagqwetha epasipoti yesibini eUkraine | Igqwetha lesibini lokundwendwela eUkraine | Abacebisi bokundwendwela besibini eUkraine
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eUkraine?
IVisa yegolide eUkraine, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eUkraine ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseUkraine ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njalo njalo. Faka isicelo sevisa yegolide ukuya eUkraine, inkqubo yegosa yegolide yeUkraine exhaswa Iinkonzo zeVisa zegolide zaseUkraine, ngokusebenzisa amagqwetha egosa eVisa egolide eUkraine, amagqwetha egosa eVisa egolide eUkraine kunye nabacebisi abagqwesileyo begosa baseUkraine.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeUkraine | Iiarhente zevisa ezimnandi eUkraine | Amagqwetha egosa egolide eUkraine | Amagqwetha egosa egolide eUkraine | Abacebisi begosa begolide baseUkraine
Lithini elona mali lisezantsi lokuhlala ngokutyala eUkraine?
Ubuncinci botyalo-mali kubuhlali ngokutyala e-Ukraine yi-EUR 100,000.
Ngaba uyabonelela ngenkxaso yezomthetho yeUkraine yoBume ngotyalo-mali?
Ewe, igqwetha lethu eUkraine kunye neearhente eUkraine zibonelela ngenkxaso yokuhlala kwakhona ngokutyala imali eUkraine.
Ngaba ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eUkraine kubiza imali eninzi?
Iindleko zokuhlala kubuTyalo-mali ukuya eUkraine kunye nokuhlala kwakhona ngokweemfuno zengxowa mali yotyalo-mali eUkraine yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa umrhumo wokubonisana kuphela ngokuHlala kuTyalo-mali eUkraine, sikwabonelela ngezinye izinto ezininzi zokuxhasa ukuhlala kwakhona ngezisombululo zotyalo mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sokuhlala ngokutyala imali eUkraine okanye i-visa yotyalomali eUkraine?
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali kunokusetyenziswa ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa kukuhlala ngokutyala imali ukuya eUkraine ukusuka eAsia, ukuhlala kwakhona kutyalomali ukuya eUkraine ukusuka eAfrika, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eUkraine ukusuka eYurophu, ukuhlala kwakhona ngokutyala imali ukuya eUkraine ukusuka eMzantsi Melika, Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eUkraine usuka eMalaysia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali ukuya eUkraine usuka eBangladesh, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali ukuya eUkraine usuka eIndonesia, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali ukuya eUkraine usuka eSri Lanka, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali ukuya eUkraine usuka eNepal, Ukuhlala kwakhona ngotyalomali ukuya eUkraine usuka eIndiya naseBuhlali ngotyalomali eUkraine ukusuka e-UAE.
Indawo yokuhlala yobungcali ngesiKhokelo kuTyalo-mali eUkraine
Cela ukubonisana simahla malunga nokuhlala kwakho ngoTyalo mali eUkraine
Amagama abalulekileyo kubuhlali ngokuTyala imali eUkraine
Hlanganisa kwi ISebe of Immigration of Ukraine , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eUkraine